बुद्ध एयरमा उड्न जनताले सोच्नै पर्ने बेला भयो ! फेरी बाहिरियो यस्तो घटना – Sunaulo Nepal TV
बुद्ध एयरमा उड्न जनताले सोच्नै पर्ने बेला भयो ! फेरी बाहिरियो यस्तो घटना
काठमाडौं, असोज २३ – बुद्ध एयरका जहाजहरुमा दिनदिनै समस्या देखिन थालेको छ। बुद्ध एयरका जहाजहरु पुराना हुदैं गएका लगायतका कारण विभिन्न समस्या देखिन थालेपछि आम नागरिकले समेत बुद्ध एयरमा यात्रा गर्न गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको हो ।
यसैबीच, बुद्ध एयरको जहाज झण्डै ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । बाराको सिमराबाट काठमाडौं आउन लागेको बुद्ध एयरको जहाजको ‘टायर फ्ल्याट’ भएको छ।काठमाडौंबाट सिमरा पुगेको सो जहाज अवतरणपछि पार्किङतिर लैजाने क्रममा टायरको हावा खुस्किएको हो।
सिमरा विमानस्थल कार्यालयका अनुसार १० बजेर ५३ मिनेटमा अवतरण भएको बुद्ध एयरको उडान नम्बर ५५३ जहाजको टायरको हावा खुस्किएपछि उडानसमेत ढिलो भएको छ।
बिहान साढे ९ बजे ल्याण्ड हुनुपर्ने जहाज ढिला गरी सिमरा विमानस्थल पुगेको थियो। समस्या आएको जहाज अहिले मर्मतको काम भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। अहिले काठमाडौंबाट अर्को जहाज लगेर यात्रुलाई काठमाडौं ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ।
ढिलो गरी बाहिरिँदै नेपालबाट मनसुन, आज पनि मौसम बदली रहने
नेपालको पश्चिमी भू-भागबाट मनसुन बाहिरिन थालेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार औसत समयभन्दा एक साता ढिलो गरी शुक्रबारबाट सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट मनसुन पूर्ण रुपमा बाहिरिएको हो ।
लुम्बिनीका पश्चिमी भुभागबाट पनि बहिर्गमन भएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ । केही दिनभित्र पूर्वी नेपालबाट पनि मनसुन बाहिरिएसँगै बर्खा पूर्ण रुपमा सकिनेछ ।‘नेपालको मौसमलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली छैन,’ महाशाखाले भनेको छ, ‘नेपालमा मनसुनको बहिर्गमनको औसत २ अक्टोबर भए पनि यस वर्षको मनसुन औसत मिति भन्दा केही पछाडी सरेको छ।’
आज बिहान प्रदेश १ र बाँकी पहाडी भू–भागको मौसम आँशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ । प्रदेश १, बागमती र गण्डकीका पहाडी भूभागका एक÷दुई स्थानमा हल्का वर्षा भएको छ ।आज दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका एक÷दुई स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।